फर्म ब्रेस्टको लागि उत्तम अभ्यासहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
फर्म ब्रेस्टको लागि उत्तम अभ्यासहरू
घर स्वास्थ्य डाइट फिटनेस आहार स्वास्थ्य oi- स्टाफ द्वारा डेबडट्टा माजुमदार | प्रकाशित: शनिबार, जनवरी २, २०१ 2016, १:00:०० [IST]
महिलाको सौन्दर्य उनको फर्म र सुन्दर स्तनहरु द्वारा accentuated छ। जे पनि तपाईं लगाउनुहुन्छ तपाईं मा सुन्दर देखिन्छ यदि तपाईं राम्रो-टोन्ड छाती छ। महिलाको स्तनहरूको दृढता स्तनको तलको मांसपेशीहरूमा निर्भर गर्दछ जुन तिनीहरूलाई समर्थन र उत्थान गर्दछ।
एक निश्चित उमेर पछि, ती मांसपेशीहरू ढीला हुन थाल्छन्। अनिवार्य रूपमा, स्तनहरू यस समयमा सघ्न थाल्छन्। के व्यायामको माध्यमबाट तपाईको स्तनहरुलाई माथि उठाउन सम्भव छ?
हो, पक्कै पनि। त्यहाँ फर्म ब्रेस्टहरूको लागि केहि राम्रा व्यायामहरू छन्। यदि तपाईं स्याग्ने स्तनहरू बाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, तपाईं व्यायामहरूका लागि जिम ट्रेनरसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई सुन्दर फिगर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
यी अभ्यासहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको हो ती मांसपेशीहरूको शक्ति विकास गर्नुहोस् , तपाईको छाती मुनि, ताकि ती तपाईको स्तनहरुलाई दृढतापूर्वक पालन गर्न सक्दछन्।
व्यायाम छनौट गर्दा तपाईको छाती फर्म बनाउनको लागि तपाईसँग धैर्यता हुनुपर्दछ। यो निश्चित छ कि तपाईं राती रातमा परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, जुन शल्य चिकित्साले तपाईंलाई दिन सक्छ।
तर शल्यक्रियाले केही साइड इफेक्टहरू ल्याउँछ, जुन तपाईं पक्कै पनि आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्न।
गर्भावस्था लि during्ग को समयमा पेट मा रेखा
त्यसोभए, राम्रोसँग आकारको फिगर राख्नको लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका कुन हो? केवल फर्म ब्रेस्टहरूको लागि नियमित रूपमा केही अभ्यासहरू गर्नुहोस्, र केही हप्ता भित्रमा एक आकर्षक फिगर पाउनुहोस्।
स्तनलाई अझ कडा बनाउनका लागि यहाँ केही उत्तम अभ्यासहरू छन्, हेर्नुहोस्।
फर्म स्तनहरूको लागि यो एक प्रभावकारी अभ्यास हो। यो व्यायाम तपाइँको pectoral मांसपेशिहरु मा काम गर्दछ र स्पष्ट उनीहरु लाई टोन। साथै, यसले तपाईंको छाती फर्म बनाउँदछ। एक पटकमा १ Do गर्नुहोस्। केही बेर आराम गर्नुहोस् र फेरि दोहोर्याउनुहोस्।
गर्भावस्था मा दही र भ्रूण को रूप
२. औषधि बल निचोल्नुहोस्:
यसले तपाईको छातीमा फर्महरू मात्र राख्दैन, तर तपाईंको काँधमा राम्रो टोन्ड पनि बनाउँछ। सिधा कुर्सीमा बसनुहोस् र आफ्नो पेट भित्र राख्नुहोस्। अब, बल निचोड गर्नुहोस् र आफ्नो पाखुरा सीधा गर्न कोसिस गर्नुहोस्। प्रक्रिया भर नचुक्न बन्द गर्नुहोस्।
Free. नि: शुल्क तौल:
सीधा खडा आफ्नो खुट्टा संग। तपाईंको हातमा प्रत्येकले we.ound पाउन्ड जति दुई तौल लिनुहोस्। अब, तपाईंको काँधको स्तरमा तपाईंको हातहरू बिस्तारै उठाउनुहोस् र तिनीहरूलाई फेरि तल झार्नुहोस्।
१ sets पुनरावृत्तिहरूको साथ sets सेटमा गर्नुहोस्। यो व्यायाम पनि तपाइँको माथिल्लो हतियार टोन। यो एक फर्म स्तन को लागी एक उत्तम व्यायाम हो?
The. टि प्लानक:
के तपाईं दृढ स्तनको लागि उत्तम अभ्यासहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? एक पुशअप स्थितिमा आउनुहोस् र तपाईंको खुट्टा स्थिर राख्नुहोस्।
तपाईंको प्रत्येक हातमा दुई वटा तौल लिनुहोस् र तपाईंको दायाँ उठाउनुहोस् र 'टी' स्थितिमा आउनुहोस्। १० सेकेन्डको लागि कुर्नुहोस् र फेरि फेर्नुहोस्।
वजन कम गर्न को लागी राम्रो छ
यदि तपाईं सेक्सी स्तन चाहानुहुन्छ भने, योगाको लागि जानुहोस्। यो योगसनले तपाईंलाई फिर्ताको आकारमा पछाडि जान मात्र मद्दत गर्दछ, तर तपाईंको मुद्रालाई पनि टोन गर्दछ। आफ्नो पेट मा झुल्नुहोस् र आफ्नो काँध खोल्नुहोस्।
तपाईंको शरीरको माथिल्लो भाग उठाउने प्रयास गर्नुहोस् र १० सेकेन्डको लागि स्थिति समात्नुहोस्। एक पटकमा times पटक यो गर्नुहोस्।
Ben. बेंच प्रेस:
यो फर्म ब्रेस्टको लागि ती व्यायामहरू मध्ये एक हो जसले पेक्टोरल मांसपेशिहरू र स्तनको ऊतकहरू सम्मिलित गरेर तपाईंको झोलाएको स्तनलाई माथि उठाउँछ।
एक बेन्च वा एक स्विस बल मा झूट। प्रत्येक हातमा डम्बेलहरू लिनुहोस्। अब, आफ्नो हात उठाउनुहोस् र तिनीहरूलाई आफ्नो छातीको नजिक ल्याउनुहोस्।
Wall. वाल पुशअप्स:
भित्ताबाट लगभग २ फिट टाढा उभनुहोस्, र तपाईंको हत्केलाहरू भित्तामा राख्नुहोस्। अब, आफ्नो धड अगाडी धकेल्नुहोस् र आफ्नो हत्केलामा एक दबाब दिनुहोस् भित्तातिर पुग्न आफूलाई प्रतिरोध गर्न। पहिलेको स्थितिमा फर्कनुहोस्।
दृढ स्तनको लागि यी अभ्यासहरू निश्चित रूपले तपाईंलाई तपाईंको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईं जुनसुकै लुगा लगाउनुहुन्छ भने तपाईं सुन्दर देखिनुहुनेछ।
के हामी चंद्र ग्रहणको समयमा सुत्न सक्छौं?
कसरी हातबाट ट्यान हटाउने प्राकृतिक रूपमा
कसरी आफ्नो प्रेमिका चुम्बन बनाउन
स्थायी रूपमा घरमा अंडरआर्म कपाल कसरी हटाउने
कसरी शरीरबाट बढी पानी हटाउने